A na-ejikarị graphite electrodes eme ígwè n'ime ọkụ ọkụ eletrik.Graphite electrode na-arụ ọrụ dị ka onye na-ebu ibu na-ewebata ugbu a n'ime ọkụ.Ihe dị ugbu a siri ike na-ebute mpụta arc site na gas, ma na-eji okpomọkụ nke arc na-emepụta maka ịgbaze ígwè.Dị ka ike nke ọkụ ọkụ eletrik, dị iche iche-dayameta graphite electrodes na-onwem.Iji mee ka electrodes na-aga n'ihu na-eji ya, a na-ejikọta electrodes site na nipples.
Isostatic graphite bụ ụdị ihe osise graphite ọhụrụ emepụtara na 1960.Site na usoro nke ihe mara mma, graphite isostatic na-enweta nlebara anya n'ọtụtụ mpaghara.N'okpuru ikuku inert, ike n'ibu nke isostatic graphite agaghị ada mbà na oke okpomọkụ, mana ọ ga-esiwanye ike iru uru kachasị ike na ihe dịka 2500 ℃.Ya mere nguzogide okpomọkụ ya dị ezigbo mma.E jiri ya tụnyere graphite nkịtị, uru ndị ọzọ ọ nwere, dị ka usoro dị mma na kọmpat, ezigbo ịdị n'otu, ọnụọgụ mgbasawanye ọkụ dị ala, nguzogide ujo dị mma, nguzogide kemịkalụ siri ike, ezigbo ọkụ na ọkụ eletrik na arụmọrụ nhazi dị mma.
Ọ bụ ngwaahịa sitere na ọkụ ọkụ LWG.A na-eji coke mmanụ ala dị ka ihe na-ekpuchi ọkụ n'oge graphitization nke electrode.Tinyere usoro graphitization, anyị nwere graphite electrode, yana ngwaahịa graphitized mmanụ ala coke.A na-ejikarị urughuru nwere nha 2-6mm mee ihe dị ka recarburizer.A na-enyocha uru ahụ dị mma iche iche.
Tụgharịa plọg na-ebuli elu n'ime oghere nke otu njedebe ma tinye ihe nchebe dị nro n'okpuru nsọtụ nke ọzọ (lee pic.1) ka ọ ghara imebi ọnụ ara;
Fụọ uzuzu na unyi n'elu na oghere nke electrode na ọnụ ara na ikuku abịakọrọ;jiri ahịhịa mee ka ọ dị ọcha ma ọ bụrụ na ikuku abịakọrọ enweghị ike ime ya nke ọma (lee foto 2);
1.Shida Carbon wuru na 1990 na n'elu 30 afọ nke ọkachamara ahụmahụ dị ka emeputa nke graphite electrode.
2. Ndị na-eme nchọpụta siri ike na ndị na-emepe emepe na ndị na-ere ahịa tozuru oke bụ nke Shida guzobere iji kwe nkwa ịdị mma nke ngwaahịa ahụ, ọkachasị nnukwu dayameta, dị ka UHP 650, UHP700, ma nye ndị ahịa ọrụ ire ere.
Shida Carbon bụ ezigbo aha graphite electrode emeputa na China, na dechara mmepụta akụrụngwa si calcining, egwe ọka, ibu arọ, igwakorita, extruding, ime, impregnation, graphitization na machining, nke nwere ike inyere anyị aka idobe na ịchịkwa kwụsiri ike àgwà.
Shida carbon bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta electrode graphite na China.
Tọrọ ntọala na 1990, ihe karịrị afọ 30 ahụmịhe nke imepụta electrode graphite;
Ụlọ ọrụ 4, na-ekpuchi usoro mmepụta ihe niile site na raw, material, calcining, crushing, screen, milling, loading, kneading, extruding, bking, impregnation, graphitization and machining;